(trg)="12.1"> ထုတ်ဖော်ခြင်း ၊
(src)="1.1"> Presentat el controvertit projecte peraun parc temàtic al Tibet
(trg)="2.2"> ၈၄ ဧကကျယ်ဝန်းပါလိမ့် မည်။
(src)="3.1"> Deixant de banda els debats polítics i ideològics , fins i tot dins del cercle de l ' ètnia xinesa Han , el desenvolupament del projecte és altament controvertit .
(trg)="3.1"> နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်ငြင်းခုန်မှုတွေကြောင့် သာမက ဟန်လူမျိုးကြားတွင်ပင်ဤစီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုသည်အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည်။
(src)="3.2"> La usuària @ 1690737580 de Sina Weibo va postejar algunes fotos que va prendre de l ' emplaçament de l ' esmentat parc temàtic i va confessar que sentia gran recança per la pèrduad' un entorn semblant en profit del desenvolupament :
(trg)="3.2"> စိနဝေဘိုဆိုက်အသုံးပြုသူ @ 1690737580က ဤဥယျာဉ်၏ ဆောက်လုပ်ရေးမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံအချို့ကို တင်ထားပြီးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ထိုကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ဤသို့ရေးသားထားပါသည်။
(src)="4.1"> Vila de Cijiaolin .
(trg)="4.1"> ချီကျောက်လင်ရွာ ၊
(src)="4.2"> Fotos de la usuària de Sina @ 1690737580
(trg)="4.2"> ဓာတ်ပုံ - စိန အသုံးပြုသူ @ 1690737580
(src)="1.1"> Cançons de bressol per revitalitzar la llengua butxullad' Austràlia
(trg)="1.1"> ကလေးချော့တေးများ သီဆိုကာ ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ထိန်းသိမ်းခြင်း
(src)="1.2"> Illa Fraser per EVC2008 .
(trg)="1.2"> ဖရေဆာကျွန်း by EVC2008 .
(src)="2.1"> Els indicis descobertsal ' illa de Fraser , situadaaQueensland , Austràlia , apunten que l ' illa podria haver estat poblada per aborígens fa 5.000 anys .
(trg)="2.2"> မျိုးရိုးစဥ်ဆက်ဤဒေသကို ပိုင်ဆိုင်လာသော ဘချူလာ လူမျိုးများသည်လှပဆန်းကျယ်သော သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်နှင့် ထို ကျွန်းကလေးအား သုခဘုံဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော က 'ဂရီ ဟု ခေါ်၀ေါ်ကြသည်။
(src)="3.1"> No obstant això , els butxulla van patir dificultats amb l ' arribada dels colonitzadors , que els van desterrar de l ' illa .
(trg)="3.1"> သို့ပေမဲ့ဘချူလာ လူမျိုးများသည်သူတို့အား နယ်မြေမှ နောက်ဆုံး ထွက်သွားရအောင်ပြုလုပ်သော ကိုလိုနီ ပြုသူတွေ ရောက်ရှိလာပြီးနောက်အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
(src)="6.1"> Gràcies als esforços actuals de revitalització del Programa de la Llengua Butxulla , s ' està recuperant la llengua .
(trg)="6.2"> မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ စိတ်၀င်စားမှုများလာအောင်အားပေးဖို့ကူညီမည့် အဘိဓာန်များ ၊
(src)="7.1"> També els mitjans digitals i Internet estan tenint un paper rellevant en aquests esforços de revitalització .
(trg)="7.1"> ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ နှင့် အင်တာနက်သည်လည်း ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုများတွင်ကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါ၀င်နေသည်။
(src)="8.2"> Junts van crear aquest vídeo , en què es pot veure la mare de Bonner cantant una cançó de bressol tradicional butxulla .
(trg)="8.2"> ဘွန်နာ ၏ မိခင်ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားသော ရိုးရာ ဘချူလာ ကလေးချော့တေးအား ဝေမျှသည့် ဤဗီဒီယိုအား သူတို့သည်အတူတကွ ဖန်တည်းခဲ့ကြသည်။
(src)="10.1"> Dues orelletes per sentir la seva paraula
(trg)="10.1"> နားရွက်လေးများက ဘုရားသခင်၏ စကားများကို နားစွင့် လေသည ်
(src)="11.1"> Una llengüeta per dir la veritat
(trg)="11.1"> ပါးစပ်ကလေးသည်အမှန်တရားကို ပြောလေသည ်
(src)="12.1"> Dorm , petit , dorm
(trg)="12.1"> ကလေးငယ်လေးရယ်အိပ်ပါကွယ်။
(src)="13.1"> Dorm , petit , dorm
(trg)="13.1"> ကလေးငယ်လေးရယ်အိပ်ပါကွယ်။
(src)="14.1"> Dorm , petit , dorm
(trg)="14.1"> ကလေးငယ်လေးရယ်အိပ်ပါကွယ်။
(src)="14.2"> L ' equip també va produir un altre vídeo per ensenyaradir les parts del cos en butxulla :
(trg)="14.2"> ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းများကို ဖော်ပြသော ဘချူလာ စာလုံးများကို သင်ပေးသော ဗီဒီယို နောက်တစ်ပုဒ်ကိုလည်း သူတို့အဖွဲ့က ပူးပေါင်းရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။
(src)="16.1"> Aquests vídeos formen part de l ' estratègia perarevitalitzar la llengua butxulla .
(trg)="16.1"> ဤဗီဒီယိုများသည်ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ဗျူဟာထဲမှ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်။
(src)="1.2"> Mira Rai , trail runner del Nepal .
(trg)="1.2"> နီပေါနိုင်ငံမှ တောင်ကျော်ဖြတ်အပြေးသမား မီရာ ရိုင်။
(src)="1.3"> Imatge de l ' usuari de Flickr rpb1001 .
(trg)="1.3"> ဓါတ်ပုံ - Flickr အသုံးပြုသူ rpb1001 .
(src)="2.1"> El trail running , un dels esports més difícils i persistents , no resulta fàcil peratothom .
(trg)="2.2"> နီပေါနိုင်ငံသူ မီရာ ရိုင်အဖို့မူကား အဆိုပါ အားကစားသည်လုပ်နေကျအရာတစ်ခု ကဲ့သို့ပင်။
(src)="2.2"> Això no obstant , s ' ha tornat una pràctica normal perala nepalesa Mira Rai .
(trg)="3.1"> ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာဘူရမ်ဘဟာတရိုင်က မီရာ အား တွစ်တာတွင်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့သည်မှာ
(src)="3.1"> L ' exprimer ministre Baburam Bhattarai va felicitar Miraatravés de Twitter :
(trg)="3.2"> နိုင်ငံတကာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်မီရာ ရေ ။
(src)="3.2"> FelicitacionsaMira Rai per guanyar la marató internacional .
(trg)="3.3"> စစ်တပ်တွေ ပြန်ပေါင်းတုန်းက အရွေးမခံရလိုက်ရဘူး .
(src)="4.1"> Va començar amb el trail running fa només un any i pocs mesos , però estàapunt de convertir-se en una de les millors atletes en aquest esport .
(trg)="3.6"> ဆက်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက မာအို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် မီရာသည်စစ်တပ်များ ပြန်လည်စုပေါင်းသည့် ကာလတွင်အရွေးမခံခဲ့ရပေ ။
(src)="6.1"> En octubre , va guanyar la Ultramarató de Muntanya de 50 quilòmetresaHong Kong .
(trg)="6.2"> ထိုအချိန်မှစ ၍ ဘယ်တော့မှ သူမ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် မကြည့် တော့.
(src)="6.2"> Desd' aquell moment , no ha mirat mai enrere .
(trg)="7.5"> မီရာသည်နီပေါအရှေ့ပိုင်းက ဘိုပူရ်​ ဒေသက ရွာငယ်လေးတစ်ရွာက လာသူဖြစ်သည်။
(src)="7.1"> Lloyd Belcher , un fotògraf i director de cine que treballaaHong Kong , va tuitejar :
(trg)="8.5"> ပိုလည်းပင်ပန်းတဲ့မြစ်ထဲက ရေသွားခပ်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။
(src)="8.1"> En una de les entrevistes , va afirmar :
(trg)="8.12"> အဲ့ဒီအလုပ်လည်း လုပ်ခဲ့ရဖူးတယ်။
(src)="8.3"> També solia carregar sacsd' arròs fins al mercat peravendre ' ls i portar dinersacasa .
(trg)="8.18"> နံနက်ပိုင်းတွင်၁၀-၁၂ ကီလိုမီတာ ခန့် ပြေးခြင်းနှင့် ညနေပိုင်းတွင်၁၀-၁၂ ကီလိုမီတာခန့် ပြေးခြင်းတို့ပါ၀င်သည်။
(src)="8.6"> La seva rutina diària és : alçar-se prompte , córrer entre 10 i 12 quilòmetres al matí i uns altres 10 o12 quilòmetresala vesprada .
(trg)="9.1"> တောင်ကျော်ဖြတ်ပြေး အားကစားတွင်နာမည်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သော မီရာသည်အပြင်းစား မာရသွန်အပြေးသမားများအဖို့အားကျအတုယူဖွယ်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
(src)="8.7"> També practica l ' escalada de muntanya i el ciclisme .
(trg)="10.1"> သူမအနေဖြင့် ထိုကလေးငယ်များသို့အကြံကောင်းတစ်ခု ပေးထားသည်မှာ
(src)="9.1"> Mira , que ara és un nom reconegut en el trail running , és tota una inspiració per als aspirantsala ultramarató .
(trg)="10.2"> " အခွင့် အရေးဆိုတာ မြစ်ထဲမှာမျောနေတဲ့သစ်ရွက်လိုပဲ ၊
(src)="1.1"> El mural gegant que va convertir Las Palmitas en el primer barri " màgic " de Mèxic
(trg)="1.2"> လာ့( စ ) ပါမီတား ( စ ) နှင့် အကြီးစား နံရံဆေးရောင်စုံရေးဆွဲမှုကြီး ၏ နောက်ဆုံးအဆင့် ။
(src)="1.2"> Las Palmitas i el macromural en la seva etapa final .
(trg)="4.4"> သူတို့၏ Facebook စာမျက်နှာက အခုလို ဆိုသည်-
(src)="1.3"> Imatge de la pàgina de Facebook del col · lectiu Germen Crew i emprada amb permís .
(trg)="4.10"> ကျွန်တော်တို့သည်အများပြည်သူနေရာများတွင်နေထိုင်သူများအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်စေရုံသာမက ပညာပေးမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၊
(src)="3.2"> A la seva pàgina de Facebook diuen :
(trg)="4.19"> ကျနော်တို့မိသားစုတွေအားလုံးမှာ သဟဇာတနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုတွေကို အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။
(src)="1.1"> Refugiats sirians ?
(trg)="1.1"> ဆီးရီးယား တိမ်းရှောင်သူတွေ အကြောင်းလား ။
(src)="1.2"> Informeu-vos bé abans de contar les seues històries
(trg)="1.3"> ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်း လူသားတွေပါပဲ ။
(src)="1.3"> Els refugiats són éssers humans .
(trg)="1.4"> Photograph from Commons Wikimedia CC-BY-SA-3 .
(src)="2.1"> Malauradament , aquest any s ' està convertint en l ' any dels refugiats sirians .
(trg)="2.1"> ဤနှစ်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်တစ်ခုက ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များ ၏ နှစ်တစ်နှစ်လို ဖြစ်နေတော့သည်။
(src)="2.2"> Tot i que la gran quantitatd' històries de persones que han fugit del seu país destrossat per la guerra són descoratjadores , no hem de creure tot el que es diu .
(trg)="3.1"> ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ရခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကတော့လူတွေပိုများများကြည့် အောင်ပြုလုပ်လိုခြင်းမှ အစ နိုင်ငံရေး ကြိုးကိုင်လိုခြင်း အဆုံး အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။
(src)="3.1"> Les causes són diverses : des de l ' activisme en les xarxes socials o " clictivisme " finsala política .
(trg)="3.2"> ဥပမာအားဖြင့် ဥရောပရှိ အချို့လက်ယာဘက်နိုင်ငံရေးပါတီများဟာ လတ်တလော ဒုက္ခသည်အရေးအခင်းများကို အသုံးချကာ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ဥရောပတွင်ခိုလှုံမှုကို တံခါးပိတ်ဖို့၄င်းတို့၏ အစီအစဉ်များကို တွန်းပို့ရန်ကျိုးစားနေကြသည်။
(src)="3.3"> De fet , una foto que , en teoria , mostrava uns refugiats sirians onejant la bandera de l ' Estat IslàmicaAlemanya , molt compartida al Facebook els últims dies , data de fa tres anys i no està relacionada amb la crisi actual .
(trg)="3.3"> အမှန်ပင်ယခု လက်ရှိ Facebook ပေါ်မှာ အလွန်ပြန့် နှံ့နေသော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည့် ဂျာမနီရှိ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ISIS အိုင်စစ်အလံကို ဝှေ့ယမ်းနေသည်ဟုဆိုနေသော ဓာတ်ပုံသည်လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ဓာတ်ပုံသာဖြစ်သည်၊
(src)="4.3"> Compartit al grup de sirians en Bèlgica al Facebook , el vídeo anterior es comparteix amb el següent missatge :
(trg)="4.5"> ဘယ်လ်ဂျီယံရောက်ဆီးရီးများ Facebook အုပ်စု ၏ ဝေမျှထားသော အထက်ဒီဗီဒီယိုကို အောက်ပါစာတန်းနှင့် တွေ့နိုင်သည်။
(src)="4.5"> Aquesta model serà famosa per aquest incident curiós i espontani que , de segur , no es repetirà .
(trg)="4.8"> မျှော်လင့် မထားတဲ့ဒုက္ခသည်ရွှေ့ပြောင်းသူတစု အီတလီမှာ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။
(src)="4.6"> Moltsd' ells són sirians i palestins .
(trg)="4.10"> သူတို့ထဲက အများစုဟာ ဆီးရီးယား နှင့် ပါလက်စတိုင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(src)="4.7"> GràciesaDéu estan bé .
(trg)="4.11"> သူတို့၏ အဘေးကင်းလုံခြုံမှု အတွင်ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(src)="4.8"> No obstant , la model que apareix al vídeo difós per tot arreu no és italiana i , ni tan sols el mateix vídeo està filmataItàlia .
(trg)="4.12"> သို့သော်ယခုလက်ရှိ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဝေမျှနေသည့် ဗီဒီယိုသည်အီတလီမှ မဟုတ်သလို ရိုက်ကူးထားသည့် နေရာမှာလည်း အီတလီတွင်မဟုတ်ပါ ။
(src)="4.9"> A més , els refugiats tampoc són sirians ni palestins .
(trg)="5.6"> ပင်ပန်းကြိုးစားမှု နှင့် အထီးကျန်မှုတို့ကို အလွန်မြင့် မားစွာ ပေးဆပ်လာရတယ်ဆိုတာကို အောက်မေ့ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါသည်။
(src)="4.14"> He conegut els Estats Units com un país amb un gran cor .
(trg)="5.7"> အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စိတ်နှလုံးထား သဘောထားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဆိုတာ ကျွန်မ သိပါသည်။
(src)="5.1"> Tan sols hi ha un problema : La fotografia no és de Síria , sinó de l ' Aràbia Saudita .
(trg)="6.2"> ယင်း ဓာတ်ပုံကို ( ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလ တုန်းက ) နာမည်ကြီးကြီး အကောင့် တစ်ခုက Twitterပေါ်တင်ပြီး နောက်ပြန့် နှံ့သွားတာပါ " ဟု Harld Doornbos ဘလော့မှာ ရေးထားပါသည်။
(src)="5.2"> Foto del blog haralddoornbos .
(trg)="7.2"> အဆိုပါ ဓာတ်ပုံမှာ ဆီးရီးယားမှမဟုတ်၊
(src)="6.2"> El xiquet que apareix en la foto és el seu nebot .
(trg)="9.6"> " ဟု ၄င်းက ဖုန်းမှ တဆင့် ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
(src)="6.7"> Aquesta és una altra fotografia del meu nebot Ibrahim darrere de les càmeres .
(trg)="10.4"> ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများက ဟလာလ်အစားအသောက်မဟုတ်လို့လက်မခံပါဟု ငြင်းဆို
(src)="8.2"> Ací ,ala frontera entre Macedònia i Grècia , els paquetsd' ajuda s ' estan rebutjant perquè tenen una creu roja en la caixa .
(trg)="12.4"> ဤကိစ္စနှင့် ပက်သက်ကာ Twitter ပေါ်တွင်လူအများအပြားက ဒုက္ခသည်များဟာ " ကျေးဇူးမသိ " ဟု အမျက်ဒေါသနှင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
(src)="8.4"> A més , al Twitter , molts van reaccionar enutjats davant la " ingratitud " dels refugiats :
(trg)="12.6"> သူတို့ကို ပြန်ပို့သင့် တယ်။
(src)="12.1"> 4ª història : la imatge retocadad' una mare siriana al mar
(trg)="12.13"> ဆီးရီးယားမိခင်တစ်ဦးဟာ ၄င်း ၏ ကလေးငယ်ကို ချီလျက်လုံခြုံဘေးကင်းရာသို့ရေကူးဖို့ကြိုးစားနေသည်ဟုထင်ရသော ဓာတ်ပုံ ။
(src)="12.2"> Una mare siriana tracta de nedar perasalvar-se amb el seu bebé als braços .
(trg)="12.14"> ယင်းဓာတ်ပုံသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြန့် နှုံသွားသည်။
(src)="12.3"> Aquesta foto ,d' una font desconeguda , va esdevenir viral , però , no és el que aparenta .
(trg)="12.15"> ( မူရင်း တင်သူကို မသိရ ) သို့သော်အမှန်တကယ်ကတော့ယင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရသလို မဟုတ်။
(src)="13.1"> Aquesta fotografiad' una mare siriana lluitant per sobreviure al mar ha pegat la volta al mónatravésd' Internet .
(trg)="13.1"> ပင်လယ်ထဲမှာ ရုန်းကန်နေသည့် ဆီးရီးယားမိခင်၏ ဓာတ်ပုံသည်အွန်လိုင်း ပေါ်တွင်ပြန့် နှုံနေသည်။
(src)="13.2"> No obstant , hi ha una errada .
(trg)="13.2"> သို့ပေမဲ့တခုခုကတော့လွဲနေသည်။
(src)="13.3"> Els internautes es van adonar ràpidament que la fotografia havia passat per Photoshop i havien cobert els cabells de la dona .
(trg)="13.3"> အင်တာနက်သုံးသူတွေဟာ ဓာတ်ပုံဟာ photoshopped လုပ်ခံထားရပြီး အမျိုးသမီး ၏ ဆံပင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သတိပြုမိခဲ့ကြသည်။
(src)="13.4"> Omneya Talaat va tuitejar :
(trg)="13.4"> Omneya Talaat က tweet တွင်ဤသို့ပြောသည်။
(src)="13.6"> No hi ha resadiscutir sobre açò .
(trg)="13.7"> ဒီနေရာမှာ ဘာမှ ငြင်းခုန်နေစရာ မရှိတော့ပါဘူး ။
(src)="13.7"> Al blog Phogotraphy es preguntaven per què s ' està usant una fotografia retocada peraposar en relleu les desgràcies dels refugiats sirians :
(trg)="13.8"> Phogotraphy ဘလော့ဂ်က ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ၏ အခက်အခဲကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ဘာ့ကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို သုံးနေသလဲကို မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
(src)="13.12"> És important la seua vestimenta ?
(trg)="13.15"> သူမ ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက အရေးကြီးသလား ။
(src)="13.13"> Aquesta és l ' explicació de la fotografia :
(trg)="13.18"> အဟုတ်ပါပဲ ထိုအဝတ်အစားများအောက်တွင်လူသားတစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။
(src)="13.14"> És clar que darrere de la roba hi ha un ésser humà , una mare que ha perdut el seu xiquet i quasi també la seua vida .
(trg)="13.19"> သူမ ကလေး ၏ ဘဝ ဆုံရှုံးပြီး သူမ ကိုယ်ပိုင်အသက်ကိုလဲ ဆုံးရှုံးလုနီးပါး ဖြစ်နေသော မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
(src)="13.15"> Volem preocupar-nos per aquesta persona i saber si ha sobreviscut peracontar la seua tragèdia .
(trg)="13.22"> သူမဟာ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင်ဝတ်ဆင်ထားတာကို တွေမြင်နိုင်သည်။
(src)="13.17"> Ara podem veure clarament que va vestida com nosaltres ,al ' estil occidental .
(trg)="13.26"> လူတို့သည်ဆက်လက်ရှင်သန်လိုခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်ထင်ကြေးပေးသင့် ပါသလား ။
(src)="1.1"> Aprèn 40 signes amb les mans dels aborígensd' Austràlia Occidental
(trg)="1.1"> သြစတြေးလျအနောက်ပိုင်း ကန္တာရဒေသတစ်ဝှမ်းမှ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ လက်ဟန်သင်္ ကေတ ဆက်သွယ်နည်းများကို လေ့လာကြည့် ပါ
(src)="2.2"> Peraaquells que habiten en aquesta regió tan poc poblada , les grans distàncies del segon desert més grand' Austràlia també poden ser un repteal ' hora de comunicar-se amb els veïns .
(trg)="2.1"> ကြမ်းတမ်းသော တောင်တောင်ရေမြေနှင့် ပြင်းထန်သောရာသီဥတုတို့ရှိသော သြစတေးလျနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှ သဲကန္တာရသည်ရှင်သန်နေထိုင်ရန်ခက်ခဲလှသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
(src)="4.1"> Balgo , Austràlia Occidental Els signes amb les mans s ' han utilitzat tradicionalment com una forma de comunicació per als pobles aborígens que han ocupat aquesta terra durant segles , molt abans de l ' arribada de la telefonia mòbil i les tecnologies digitals .
(trg)="2.2"> လူနေနည်းပါးသော ဤဒေသတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ကြိုးပမ်းကြသူများအဖို့သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ဒုတိယအကြီးဆုံး သဲကန္တာရ ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့် သော အကွာအဝေးတို့က ၄င်းတို့အား အနီးတဝိုက်ဒေသတွင်နေထိုင်သူတို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်ခက်ခဲစေပါသည်။
(src)="5.1"> Comareconeixementaaquesta forma de comunicació tan pràctica , el productor local Willi Lempert es va associar amb un grupd' ancianes aborígens entusiastes de la comunitat de Balgo .
(trg)="5.1"> လမ်းပတ်အနေဖြင့် ထိုသင်္ ကေတတို့ကို လေ့လာနေရင်း ဤသို့ရှင်းလင်းပြောပြသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခု ဖန်တီးရန်စိတ်ကူးရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(src)="6.2"> Destaca la importànciad' aquests signes amb les mans .
(trg)="5.2"> ၄င်းက ထိုသင်္ ကေတတို့၏ အရေးပါပုံကို ရှင်းပြသည်မှာ-
(src)="6.6"> Al vídeo , peracada signe amb les mans que ensenyen les ancianes , apareix l ' equivalent en kukatja i la traduccióal ' anglès .
(trg)="7.1"> ဗီဒီယိုထဲတွင်ပါ၀င်ခဲ့သရုပ်ဖော်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးကြီးများထဲမှ ပရီ ပရီ နှင့် မနာရာ တို့သည်ဒေသခံဘဝတွင်လည်း အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါ၀င်ကြသည်။
(src)="7.1"> Lamprey va escriure que durant el rodatge del vídeo per al blog , s ' ho van passar molt bé .
(trg)="7.3"> စင်တာ ၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရေးသားထားသည်မှာ " ကပုလုလန်ဂူ တွင်ဖြစ်သမျှ ပျက်သမျှသည်သက်ကြီးသူများ မရှိပဲနှင့် ဖြစ်မလာနိုင်" ဟူ ၍ ဖြစ်သည်။
(src)="8.5"> Això les converteix en les guardianesd' una immensa riquesad' històries , habilitats i coneixement cultural .
(trg)="7.5"> ထို့အတွက်ကြောင့် ၄င်းတို့သည်ကြွယ်ဝလှသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ၊